काठमाडौंमा बालेन शाहले कति मत पाउलान ? के उनले चुनाव जित्ने संभावना छ ? हेरौं सम्पूर्ण अंकगणित – Sajha Post
काठमाडौंमा बालेन शाहले कति मत पाउलान ? के उनले चुनाव जित्ने संभावना छ ? हेरौं सम्पूर्ण अंकगणित
साझापोस्ट	२५ वैशाख २०७९ १६:२८
२५ बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन अहिले सामाजिक संजालमा निकै चर्चित छन् । घरदैलो अभियानमा पनि उनको पछि ठुलै भीड देखिन्छ । बालेनको चर्चा बढेसँगै ठुला दलका उम्मेद्वारलाई टाउको दुख्न थालेको छ । नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले त निरन्तर बालेनमाथि हमला गरिरहेका छन् ।
यसले पनि स्थापित आत्तिएका हुन् कि भन्ने देखिन्छ । सँगसँगै बालेनले कति मत ल्याउलान भन्ने चर्चा पनि अहिले सबैतिर देखिन्छ । कतिपयले उनले जित्ने दाबी गरिरहेका छन् भने कतिपयले नजिते पनि सम्मानजनक मत ल्याउने बताइरहेका छन् । एमाले र कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले भने उनलाई अन्डरस्टिमेट गरेका छन् । उनीहरु बालेनले पाँच हजार मत पनि नल्याउने बताईरहेका छन् । खासमा बालेनले कति मत ल्याउलान त ? के उनी चुनाव नै जित्ने अवस्थामा छन् ? उनले कति मत ल्याउँदा कुन उम्मेद्वारलाई बढि असर पर्छ ? यसबारे हामी पनि चर्चा गरौं । तर त्यो भन्दा पहिले काठमाडौंमा गत चुनावको परिणाम कस्तो थियो त्यो हेरौं ।
२०७४ सालको चुनावमा काठमाडौं महानगरमा राप्रपासँग तालमेल गरेको नेकपा एमालेले मेयर र एक्लै लडेको कांग्रेसले उपमेयर जितेको थियो । मेयरमा जितेका विद्या सुन्दर शाक्यले ६४ हजार ९१३ मत ल्याएका थिए । उनका निकट्तम प्रतिद्धन्दी नेपाली कांग्रेसका राजुराज जोशीले ४५ हजार २६९ मत ल्याए । तेस्रो स्थानमा रहेकी विवेकशिल नेपाली दलकी रन्जु न्यौपानेले २३ हजार ४३९ र चौथो बनेका साझा पार्टीका किशोर थापाले १८ हजार ४९६ मत ल्याए । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका सर्वोत्तम दास डंगोलले ७ हजार ९०६, तत्कालिन नयाँ शक्तिका पवित्र बज्राचार्यले ६ हजारभन्दा बढी मत ल्याए ।
उपमेयरमा कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी ५८ हजार ९५२ मत ल्याएर विजयी भईन । राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठले ३४ हजार ८५४ मत मात्रै ल्याए । साझा पार्टीका निरुपमा यादवले ११ हजार ५३३ र माओवादीका शुसिला कुमारी पौडेलले १० हजार ४४८ मत ल्याइन ।
बालेनका कारण कसलाई बढी घाटा ?
गत चुनावमा अहिले बालेनको जस्तै रञ्जुको चर्चा थियो । सामाजिक संजालमा त उनले चुनाव जित्ने तहकै हल्लाखल्ला देखिन्थ्यो । रञ्जुको दलको सांगठनिक आधार कमजोर थियो । त्यसैले उनले ल्याएको धेरै मत व्यक्तिगत नै थियो । किशोर थापाले पनि सम्मानजनक मत ल्याएका थिए । विवेकशिल र सझा पार्टी पछि एकीकृत भए । यस आधारमा यी दुईको मत जोड्दा झण्डै ४२ हजार हुन्छ ।
बालेन शाह गायककार र कलाकार पनि हुन् । स्वभाविक रुपमा युवा समूह अहिले उनीप्रति आकर्षित देखिन्छ । विगतमा धेरै मत ल्याएको साझा पार्टी अहिले चर्चामा छैन । आन्तरिक विवादका कारण सुस्ताएको छ । पहिलेजस्तो आकर्षण पनि देखिदैन । यसरी हेर्द विगतमा रञ्जु र किशोर थापाको पक्षमा लागेका अधिकांश युवा मतदाता यसपटक बालेनको पक्षमा लागेका छन् । त्यसैले बालेनका कारण सबैभन्दा ठुलो नोक्सानी पनि साझा पार्टीलाई नै हुने देखिन्छ ।
त्यसवाहेक गठबन्धनसँग असन्तुष्ट बनेका कांग्रेसका केही नेता कार्यकर्ता पनि बालेको पक्षमा देखिएका छन् । अर्कातिर केशव स्थापित जुझारु देखिन्छन् । त्यसैले धेरै युवाको भोट उनलाई जाने संभावना थियो । बालेनका कारण अब त्यो रोकिएको छ । त्यसैले कांग्रेस र एमाले दुबै दलका युवा मतदाताको एउटा हिस्सा पनि बालेनतिर गएको छ । एमालेले नयाँ थपिएका मतदाताको आफ्नो दलप्रति आकर्षण रहेको बताउने गरेको छ । तर काठमाडौंमा नयाँ मतदाता धेरै बालेनको पक्षमा देखिन्छन् । यसरी हेर्दा साझा पार्टीपछि बालेनका कारण एमालेलाई बढी घाटा हुन सक्छ । स्थापितको छुच्चो बोलीका कारण बिच्किएका केही मतदाता पनि बालेनको पक्षमा लाग्न सक्छन् ।
बालेनलाई जित्न कति सहज ?
यो प्रश्नको उत्तर अघि सबैभन्दा पहिले काठमाडौंका मतदाताको अवस्था जान्नु आवस्यक छ । महानगरमा अहिले ३ लाख २४२ मतदाता छन् । यो गत चुनावको भन्दा करिब २१ हजार बढी हो । गत चुनावमा १ लाख ६७ हजार २८६ सदर मत थियो । अहिले मतदाता थपिएकाले १ लाख ८० हजारको हाराहारीमा मत खस्न सक्छ । यसरी हेर्दा दुईजनाको सिधा प्रतिस्पर्धामा जित्नका लागि ९० हजार र त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा ६५ हजार हाराहारीमा मत ल्याउनु आवस्यक देखिन्छ । बालेनले जित्ने अवस्था आउनु भनेको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा पनि स्वत हुनु हो । किनकी सांगठनिक रुपमा एमाले र गठबन्धनका उम्मेद्वार पहिल्लै प्रतिस्पर्धी छन् । अब बालेनलाई जित्न चाहिने मत ६५ हजार कसरी आउन सक्छ भन्ने नै अहिलेको प्रश्न हो । यद्यपी उनले ९० हजार भन्दा बढी मत ल्याउने दाबी गरिरहेका छन् ।
काठमाडौंमा यसपटक धेरै दलका उम्मेद्वार छैनन् । माओवादी, जनता समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मेयरमा कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेका छन् । विगतकै नतिजा हेर्दा कांग्रेसले पाएको ४५ हजार मतमा यी तीन दलको १५ हजार भन्दा बढी मत थपिनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले ६० हजार भन्दा बढी मत ल्याउन कुनै समस्या देखिदैन । अब नयाँ मतदाताबाट उनलाई कति मत जान्छ त्यो स्पष्ट छैन । त्यसवाहेक पहिले विवेकशिल साझाले ल्याएका मतबाट कांग्रेसमा केही मत जाने संभावना पनि छ ।
एमालेले विगतमा पाएको मतमा राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको घट्दा ५५ हजार हाराहारी हुन्छ । त्यसमा केही नयाँ मतदाता र कोर काठमाडौंको अलि बढी मत स्थापितलाई जान सक्छ । यसरी हेर्दा उनी पनि सिंहकै हाराहारीमा पुग्छन् । अब रह्यो विवेकशिल साझा र राप्रपाको । साझाले गत चुनावमा पाएको मत यसपटक नपाउने लगभग निश्चित छ । एक त पार्टी नै आन्तरिक कलहमा फसेको छ । अर्कातिर उसले अपनाएको शैद्धान्तिक आधार राप्रपासँग उस्तै देखिन्छ । त्यसैले यसपटक साझाकी मेयरकी उम्मेदवार समिक्षा बाँस्कोटाले ५ देखि १० हजार मात्रै मत पाउन सक्छिन । राप्रपाले पनि त्यसकै हाराहारीमा मत ल्याउने अनुमान छ ।
अब बाँकी रहेका सबै मत ल्याउँदा बालेन बल्ल प्रतिस्पर्धामा पुग्नेछन् । जुन एकदमै सहज पनि छैन र एकदमै असहज पनि लाग्दैन ।
बालेनले कति मत ल्याउलान ?
सांगठनिक आधार नभएकाले बालेनले कति मत ल्याउँछन् भनेर यकिन गर्न निकै गाह्रो छ । तर काठमाडौंमा केही चुनावको नतिजा केलाउँदा यहाँ स्वीङ मतदाताको संख्या निकै बढी छ । जुन अन्यत्र देखिदैन । कहिले एमाले, कहिले माओवादी त कहिले राप्रपा नेपालसम्मले काठमाडौंमा निकै धेरै मत ल्याएका उदाहरण छन् । काठमाडौं बाहिर यस्तो हुनु निकै दुर्लभ मानिन्छ । यिनै अस्थिर र नयाँ खोज्ने मतदाताको संख्या ठुलो रहेकाले नै बालेनले अहिलेको समर्थन र चर्चा पाएका हुन् ।
गत चुनावलाई नै आधार मान्ने हो भने यस्तो संख्या पचास हजारको हाराहारीमा देखिन्छ । अहिले बढेर त्यो ६० हजार पुग्न सक्छ । यसबाट बालेनले उल्लेख्य मत पाउँछन् भन्नेमा शंका रहेन । अहिले उनको पक्षमा कलाकारदेखि सामाजिक अभियन्तासम्म खुलेर लागेका छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीको एउटा समूह पनि बालेनको पक्षमा क्याम्पेन गर्न व्यस्त छ । तर ति सबै काठमाडौंका मतदाता भने होईनन् । पहिले विवेकशिल र साझाले पाएको मध्येबाट बालेनले ३० देखि ३५ हजार सम्म मत तान्न सक्छन् । त्यसवाहेक उनले नयाँ मतदाताको पनि आधा भोट ल्याउने संभावना छ ।
यसरी हेर्दा उनको मत ४० देखि ४५ हजारसम्म पुग्छ । अब जित्नका लागि उनलाई थप २०/२५ हजार मत चाहिन्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाबाट उनले त्यति मत तान्न सके चुनाव जित्नेछन् । सकेनन भने उनको मत ५० हजार भन्दा तल नै हुनेछ । त्यसैले अहिले एमाले र कांग्रेस बालेन तिर आफ्ना मतदाता आकर्षित नहुन भनेर बढी सचेत देखिन्छन् । बालेन पनि संगठित मतलाई कसरी तान्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् । आगामी पाँचदिनले नै उनको हारजित तय गर्नेछ । तर उनले जिते पनि/हारे पनि स्वतन्त्र रुपमा उठेर बालेनले पाउने मत दलहरुका लागि भने चुनौतिपुर्ण हुने स्पष्ट देखिएको छ ।
रेनु दाहाल सवारी दुर्घटनामा परिन, उपचार हुँदै
बालेनलाई बधाई दिँदै पत्नी सविनाको भावुक स्टाटस, कहिल्लै हार्न नदिने प्रतिवद्धता
भलबारी डिपोमा ठुलो दुर्घटना टर्‍यो, ट्याङ्करमा लागेको आगो नियन्त्रणमा
बालेनलाई माधव नेपालको बधाई, भन्छन–हाम्रो पार्टी सहकार्य गर्न तयार छ